Cimilalada Kululi Ma Dili Kartaa Coronavirus? – Xeernews24
Cimilalada Kululi Ma Dili Kartaa Coronavirus?
25. März 2020 /in WARAR/NEWS /von admin
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2020/03/Addunka.jpg 351 624 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2020-03-25 23:11:102020-03-25 23:11:10Cimilalada Kululi Ma Dili Kartaa Coronavirus?
DAAWO: Azerbaijan iyo Armenia oo soo bandhigay muuqaallada jabka ay isku gaysteen & MW Ruushka oo la hadlay dhiggiisa Armenia.
Ciidamaddi Liyuu Booliska Canfarta oo mar kale dad xoola dhaqata ah ku laayey madane.
Dabaaldeg laga mamnuucay Yuhuudda Masar.
Maamulka Somaliland oo looga digay in ficiltanka DF darteed ay halis u galiso... Akhriso;Shaxda Diblomaasiyadda Soomaaliya ee Xiisada Itoobbiya iyo Masar.